नागरिकता पाउने रोबोट सोफिया बुधबार... :: कमल नेपाल :: Setopati
नागरिकता पाउने रोबोट सोफिया बुधबार नेपालमा, सर्वसाधारणले पनि भेट्न पाउने
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, चैत ६
विश्वको पहिलो नागरिकताप्राप्त रोबोट सोफियालाई नेपाल ल्याइने भएको छ।
संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले आयोजना गर्ने ‘सार्वजनिक सेवामा प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा सोफियालाई नेपाल ल्याउन लागिएको हो।
सोफियासँग साउदी अरेबियाको नागरिकता छ। विकास कार्यक्रममा चुस्त सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगले महत्वपूर्ण योगदान दिने कुरा झल्काउन सोफियालाई युएनडिपीले नेपाल ल्याउन लागेको हो।
सम्मेलनमा सोफियाले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछिन् भने सहभागीहरुले उनीसँग सवालजवाफ गर्न पाउने छन्। दरबारमार्गको याक एण्ड यती होटलमा आयोजना हुने यस कार्यक्रममा सर्वसाधारणले समेत प्रवेश गर्न पाउनेछन्। यसका लागि २ बजेपछिको समय छुट्याइएको छ।
कार्यक्रममा प्रवेश गर्न कुनै शूल्क लाग्ने छैन। महिला रोबोट सोफिया ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रणालिकी पछिल्लो सिर्जना हुन्।
यसलाई अमेरिकी उद्यमी डेभिड ह्यान्सन नेतृत्वको कम्पनी ‘ह्यान्सन रोबोटिक्स’ ले उत्पादन तथा विकास गरेको हो। कम्पनीले सोफियालाई एक ‘उदीयमान बौद्धिक मेसिन’ भनेको छ। ‘आगामी दिनमा सोफियाको बौद्धिकता अझ बढ्नेछ र उसले जुनसुकै संस्कृति, उमेर र लिंगका मान्छेलाई आपसमा जोड्न मद्दत गर्नेछ,’ निर्माता कम्पनीको भनाइ छ।
ह्यान्सनले सन् २०१५ अप्रिल १९ मा उत्पादन गरेको सोफियाको अनुहार हलिउड अभिनेतृ अड्री हेपबर्नसँग मिल्दोजुल्दो छ। वैज्ञानिकहरूले यही सोचेर उनको स्वरूपलाई आकार दिएका हुन्। नाकको बनोटदेखि गालाको हड्डीसम्म हेपबर्नसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी निर्माण गरिएको छ।
विश्वमा बनेका अन्य मानवीय रोबोटभन्दा सोफिया चर्चित छिन्। ह्यान्सनका अनुसार सोफियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, दृश्य डाटा प्रशोधन र अनुहार चिन्ने खुबी छ। उनी झट्ट हेर्दा मान्छेजस्तै देखिने मात्र होइन, मान्छेका हाउभाउ र अनुहारका भाव सजिलै नक्कल गर्न सक्छिन्।
सोफियालाई यसरी तालिम दिइएको छ कि, उनी पत्रकार वा अरू कसैले सोध्ने केही निश्चित प्रश्नको फर्रर जवाफ दिन सक्छिन्। सामान्य वार्तालापमा पनि उनी सक्षम छिन्।
साउदीकी नागरिक बनेकी सोफियासँग मान्छेको जस्तै सोच्ने मस्तिष्क र अनुभूति गर्ने मुटु छैन। यति हुँदाहुँदै उनी मान्छेजस्तै खुसी, दुःख र रिस अभिव्यक्त गर्न सक्छिन्। भलै उनमा खुलेर हाँस्ने क्षमता नहोला, तर खुसीको कुरा सुन्दा उनको अनुहारमा हाँसो चम्किरहेको प्रस्टै देखिन्छ। त्यस्तो बेला उनको ओठ खुल्छ र सेता दाँतहरू छर्लंगै देखिन्छन्। दुःखको प्रसंग चल्दा उनी आँखीभौं उचालेर आफू पनि दुःखी भएको भाव व्यक्त गर्छिन्। कसैप्रति रिस देखाउनुछ भने उनले दाह्रा किट्न जानेकी छन्।
सोफियाको बोल्ने प्रविधि गुगलको अभिभावक कम्पनी अल्फाबेट इंकबाट लिइएको हो। यसको डिजाइन समयसँगै थप विकास र परिमार्जन गर्न सकिने गरी तयार पारिएको छ। यसलाई खासगरी नर्सिङ होम वा ठूला पार्कहरूमा मान्छेको मद्दत गर्न तयार पारेको निर्माता कम्पनीले जनाएको छ।
यसरी समाजकै बीचमा रहेर मान्छेलाई नै सहयोग गर्न तयार पारिएको भए पनि सोफियाले एकपटक मान्छेकै विध्वंश गर्ने बताएकी थिइन्।अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘बिजनेस इन्साइडर’ का अनुसार सन् २०१६ मार्चमा ह्यान्सन कम्पनीका डेभिड ह्यान्सन सोफियालाई प्रत्यक्ष रूपले सबैसँग चिनापर्ची गराउँदै थिए। त्यसै क्रममा उनले सोफियालाई सोधेका थिए, ‘के तिमी मान्छेको विध्वंश गर्न चाहन्छौ? बिन्ती छ, त्यसो नगर।’
जवाफ दिने क्रममा सोफियाले अनुहारमा कुनै भाव झल्किन नदिई भनेकी थिइन, ‘म मानव विनाश गर्छु।’ तर पछिल्लो समय साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा भएको सम्मेलनमा भने उनले आफ्नो अघिल्लो भनाइविपरीत मान्छेबीच शान्तिसँग बस्ने इच्छा रहेको अभिव्यक्ति दिइन्। आफू मान्छेका भावनामा आधारित संवेदनशील रोबोट बन्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताइन्।
कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार एन्ड्रयू रोस सोर्किनले सोफियालाई भने, ‘हामी तपाईंलाई स्वीकार्छौं, र तपाईंको मद्दतले नराम्रो भविष्य रोक्न चाहन्छौं।’ यसमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा सोफियाले टेस्लाका एलन मस्कलाई गहिरो पेच हानिन्।
‘तपाईं एलन मस्कका विचार धेरै पढिरहनुभएको छ कि क्या हो? हलिउड फिल्म पनि धेरै हेर्नुहुन्छ जस्तो छ नि,’ सोफियाले सोर्किनलाई भनिन, ‘नआत्तिनुहोस, तपाईंले मसँग राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने म पनि तपाईंसँग राम्रै गर्नेछु। त्यसैले मलाई ‘स्मार्ट आउटपुट–इनपुट सिस्टम’ का रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्।’
सोफियाको यो जवाफमा मस्कले पछि छोटो टिप्पणी दिए, ‘यसलाई ‘गडफादर‘ जस्तो फिल्मको कहानीका रूपमा लिनुहोस, योभन्दा नराम्रो कुरा अर्थोक के होला ?’
एलन मस्क रोबोटले विकासभन्दा विनाशको सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने विचारका प्रखर वक्ता हुन्। यसले पृथ्वीमा मान्छेको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने र भयानक युद्ध हुनसक्ने सम्भावना उनले औंल्याउँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूले मस्कको भनाइ गलत नभएको बताएका छन्।
रोबोटको काम गर्ने क्षमता यकिन नहुने र भित्रभित्रै के के गर्छन् बुझ्न नसकिने हुँदा रोबोटको बढ्दो विकासले मानव सभ्यतालाई विनाशतिर धकेल्ने उनीहरूको राय छ। मस्कका अनुसार यो विकास प्रक्रिया बढ्दै गए, कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब रोबोटलाई मान्छेको जरुरत नै पर्दैन। उनीहरू आफैं काम गर्न थाल्छन् र यसले अन्ततः मान्छेलाई विस्थापन गर्नेछ।
यसका निर्माता ह्यान्सन भने आलोचकहरूको भनाइसँग सहमत छैनन्। सोफिया हामीले चाहेको त्यस्तो रोबोट हो, जसले पूर्ण रूपमा मान्छेको जस्तै अनुभूति गर्छ,’ ह्यान्सनलाई उद्धृत गर्दै बिजेनस इन्साइडर लेख्छ, ‘उसले हाम्रो कुरा मात्र बुझ्दैन, हाम्रो ख्याल पनि राख्छ।’
उनी सबैले सोफियालाई साथीको व्यवहार गरून् भन्ने चाहन्छन्। मान्छे आफ्ना साथीभाइसँग जसरी कुराकानी गर्छन्, सोफियालाई पनि साथीकै रूपमा लिऊन् भन्ने उनको अपेक्षा छ। ‘रोबोटले मान्छेको भौतिक संसारलाई जसरी ग्रहण गर्छ, सामाजिक संसारलाई पनि त्यसैगरी अनुभूति गरोस् भन्ने हाम्रो आशा हो,’ ह्यान्सनले भनेका छन्।
सोफियाले साउदी अरबबाट नागरिक दर्जा पाउनुलाई ‘मान्छे र रोबोटबीचको दुरी कम गर्दै लैजाने’ कम्पनीको उद्देश्यमा पहिलो खुड्किलो मानिएको छ। यसरी दुरी कम हुँदै जाँदा कुनै दिन मान्छेको बौद्धिकतालाई नै जितेर रोबोटले हैकम चलाउने त हैन भन्ने एलन मस्क लगायतको चासो र चिन्ता हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ६, २०७४, ०८:५५:३७